ကောင်းကင်စိတ်နဲ့ မြေလိုကျင့်တဲ့ ဧည့်သည်ကြီး - ၂ | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
ဒီလိုနဲ့ ဆရာကြီးနဲ့အတူ (၅)ဆောင်မှာနေရင်း ၁၉၉၃၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၁၉ ရက်မှာ ဆရာကြီး အသက်(၆ဝ) ပြည့်တယ်။ (၆ဝ) ပြည့်အမှတ်တရအနေနဲ့ သူကဗျာတစ်ပုဒ်ဖွဲ့တယ်။ ကဗျာကတိုတိုလေးပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီ ကဗျာလေးဟာ သူအကျဉ်းခံကာလမှာ ပထမဆုံး ဖွဲ့တဲ့ကဗျာလေးလို့ ပြောပါတယ်။
လငပုတ်ဖမ်း လွတ်ခဲ့ပြီ...'' တဲ့။ ဒါပါပဲ။ ဒီကဗျာလေးကို ကျနော်နဲ့အတူ တခြား ရဲဘော်တွေကိုလည်း ရွတ်ပြတယ်။ အပြင်ထုတ်ထားချင်တယ်လို့လည်းပြောတယ်။ ခက်တာက အဲဒီကာလ ထောင်တွင်း အခြေအနေက အနေအထိုင်တော်တော်ကြပ်တဲ့ကာလ။ စာအုပ်ဖတ်ခွင့် အရှင်းမရှိ။ စာရေးဖို့ ဆိုတာ ဝေးရော။ စာရွက်ဆိုရင် ထောင်ဝင်စာမုန့်ထုပ်ထဲပါတဲ့ တံဆိပ်တောင် ဖောက်ထုတ်ထားကြတာ။ ကျနော်တို့လက်ထဲ ဘောပင်တစ်ချောင်းမိရင် သေနတ်တလက်မိသလောက်ကို အပြစ်ကြီးတာ။ အဲဒီကာ လမှာ သူ့ကဗျာကို အပြင်ထုတ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက် ရှိနေတယ်။
ဒါပေမဲ့ အင်းစိန် မှာနေတဲ့ ရိုးရိုး အကျဉ်းသားတစ်ယောက် လွတ်ရက်စေ့ခါနီးပြီ။ သူ့ကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီး သူ့အင်္ကျီချုပ်ရိုး ကြောင်းထဲ သူရှာပေးတဲ့မှင်တံလေးနဲ့ ခြစ်ခြစ်ကုတ်ကုတ်ရေးပြီး ထည့်လိုက်တယ်။ သူလွတ်တော့ အဲဒီ့ အင်္ကျီဝတ်ပြီးထွက်သွားလေရဲ့။ နောက် ဆရာကြီးမိသားစုထောင်ဝင်စာလာတော့ အဲဒီ့ကဗျာလေး အိမ် ရောက်သွားပြီဆိုတော့ တော်တော်ဝမ်းသာသွားကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၉၇ ကျနော် လွတ်တော့ ဆရာကြီး ကဗျာစာအုပ်ထုတ်တဲ့အထဲ အဲဒီကဗျာလေးပါတာ မတွေ့ဘူး။ ဒါနဲ့ဆရာကြီးကိုမေးကြည့်တော့ သူက ''အေး..ဒီကဗျာလေး အသိမ်းလွန်ပြီးပျောက်နေတယ်။ ငါလည်း မမှတ်မိတော့ဘူး'' တဲ့။ ကျနော် အလွတ်ရသေးတယ်ဆိုတော့ သူဝမ်းသာအားရ ရေးမှတ်သွားတယ်။ အဲဒီအချိန်အနားမှာ ကိုယဉ်မင်းပိုက် ရှိနေတော့ ဆရာကြီးက သူ့ကို ကဗျာလေးပြပြီး နောက်တစ်ခါ ထပ်ရိုက်ရင်ထည့်ရအောင်လို့ ပြောလိုက် တယ်။ ခုထိ ထည့်ဖြစ်၊ မထည့်ဖြစ် ကျနော်မသိဘူး။
ဒီလို ဆရာကြီးနဲ့ (၅) ဆောင်မှာ အတူနေကြတုန်း မှတ်မှတ်ရရလေးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ ၁၉၉၄၊ သြဂုတ်လလောက်မှာ ထင်ပါရဲ့။ အဲဒီတုန်းက ဆရာကြီးနဲ့ကျနော်နေရတာ အခန်းမတူဘူး။ သူက (၃)၊ ကျနော်က (၄)ခန်း။ တစ်ခန်းထဲအတူတူနေရဖို့ ဆရာကြီးရော၊ကျနော်ရော ထောင်မှူးစောထွန်းကို အကြိမ်ကြိမ်တင်ပြကြပေမဲ့ မရခဲ့ဘူး။ ထောက်လှမ်းရေးတင်ပြရဦးမယ်တို့၊ ရုံးချုပ်ထိတင်ရမှာတို့နဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြခဲ့တာ(၁) နှစ်ကျော်ကျော်ရှိပြီ။
တစ်နေ့တော့ (၄) ခန်းမှာအတူတူနေတဲ့ ကိုကိုကြီး(မြမန္တလာ)နဲ့ ကိုကျော်ငွေတို့ “Food Poison” ဖြစ်ကြတယ်။ အန်လဲအန်၊ ဝမ်းလည်းသွား ကြတယ်။ ဖြစ်တဲ့ အချိန်က တန်းပိတ်ပြီး ည (၇)နာရီလောက်မှာဖြစ်တာ။ အဲဒီနေ့ကတောင် အသား အစား ငါးကြော်ကျွေး တဲ့နေ့။ (တစ်ပတ်မှာ တစ်ခါကျွေးတာ။) ညနေခင်း ငါးကြော်နဲ့ထမင်းစားကြ တော့ ငါးကအပေါ်ယံကျက် ပေမဲ့ အတွင်းပိုင်းမကျက်ဘူး။ သွေးစသွေးနလေးတွေ တွေ့ရတယ်။ အဲဒါစားလို့ (အခန့်လဲမသင့်လို့) ခုလိုဖြစ် တာပါ။ ဒါကိုတာဝန်ကျဝန်ထမ်းခေါ်ပြီး ဆေးရုံအကြောင်း ကြား ပေးဖို့ပြောလိုက်တော့ ထောင်မှူးစောထွန်း ရောက်ချလာပြီး ''မင်းတို့က အစားအသောက်မှ မဆင်ခြင်ကြတာ၊ အခုတော့ ဟိုလူကယ်ပါ၊ ဒီလူကယ်ပါ နဲ့ ဇာတ်လမ်းကိုရှုတ်တယ်..'' ဆိုပြီး အော်ကြီး ဟစ်ကျယ် လုပ်ပါတော့တယ်။
ကျနော်လည်း ထောင်းကနဲ့ ဒေါသထွက်သွားပြီး ''ထောင်မှူး - ခင်ဗျား ဘာသိလို့ ပြောနေတာလဲ။ အခုဖြစ်တာ အစားသောင်းကျန်းလို့ မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ထောင်က ပေးတဲ့ငါးကြော် မကျက်လို့ဖြစ်တာ။ အပိုတွေလျှောက်ပြောမနေနဲ့။ အရေး ကြီးတာ ဆေးရုံအမြန်ပို့ပေး'' လို့ပြောချလိုက်တယ်။ ထောင်းမှူးစောထွန်းကလည်းမခံဘူး။ ''မင်းက ငါ့ကို ပြန်ပြောရအောင် ဘာကောင်မို့လို့လဲ။ အကျဉ်းသားက ငါ့ကို ဘာမှပြန်ပြောစရာမရှိဘူး။ မင်းကိုအရေးယူ လိုက်လို့ရ တယ်။ အခုထုတ်ရိုက်ပစ်လိုက်မယ်..'' ဘာညာဆိုပြီး ရှူးရှူးရှားရှားပြန်အော်တယ်။ ကျနော် ကလည်း ''အကျဉ်းသားလဲလူပဲ။ ခင်ဗျားသတ္တိရှိရင်ထုတ်ရိုက်စမ်းပါ။ သတ်ပစ်လို့ရတယ်။ ကျုပ်ကလုံးဝ ဂရုစိုက် တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ဘက်ကမှားတာကို ကာကွယ်ချင်တာနဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီအပြစ်လျှောက်ဖို့ချင် သေးတယ်။ အခုဆေးရုံအမြန်အကြောင်းကြားပေး..''ဆိုပြီး စိတ်ထဲရှိရာဖောက်ခွဲပစ်လိုက်တယ်။ ပြီး တော့ ဆက်ပြီး ဝုန်းဒိုင်းကြဲလိုက်တော့ ထောင်မှူးထွက်သွားတယ်။
ကိုကိုကြီးတို့အခြေအနေက ဆက်တိုက် အန်၊ ဝမ်းလည်းသွားဆိုတော့ တော်တော်ပင်ပန်း နွမ်းနယ် နေပြီ။ အဲဒါကို စိုးရိမ်တာရော၊ လူကိုနိုင့်ထက်စီး နင်းလာဟောက်တာကိုရောကြောင့် ကျနော်ဒေါသ အထွတ်အထိပ်ဖြစ်နေတာ။ လူပေါင်း (၁၂ဝ)လောက်ရှိ တဲ့ ကျနော်တို့အခန်းလည်း အားလုံးတိတ်ဆိတ်နေကြတယ်။ ဟိုဖက် ဆရာကြီးတို့အခန်းကတောင် ကျနော် နဲ့ထောင်မှူး အပြန်အလှန်အော်ဟစ်နေကြတာကို အတိုင်းသား ကြားနေရတယ်။ ခဏနေတော့ ဝန်ထမ်း တွေရောက်လာကြပြီး ကျနော့်ကို စားမတတ်၊ ဝါးမတတ် ဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်။ တောက်တခတ်ခတ်၊ တုတ်တကိုင်ကိုင်နဲ့။ ကျနော်လည်းမထူးဘူးဆိုပြီး ''အရေးပေါ်လူနာ၊ အရေးပေါ်လူနာ..''ဆိုပြီး ဆက် တိုက် အသံကုန်ဟစ်အော်နေလိုက်တယ်။ ဒီတော့မှ တံခါးလာဖွင့်ပြီး ကိုကိုကြီးတို့ကို ဆေးရုံခေါ်သွား တယ်။ ဆေးရုံရောက်ပြီး အငံရည်သွင်းပြီး သက်သာ သွားတယ်လို့ နောက်ပိုင်းပြန်သိရတယ်။
နောက်တစ်နေ့မနက် တန်းဖွင့်ဖွင့်ချင်း ဆရာကြီး ကျနော့်ဆီရောက်လာတယ်။ ညကဖြစ်ပျက်ပုံမေးလို့ ကျနော်အသေးစိတ်ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် ပြောပြလိုက်တယ်။ ''ညက ထောင်မှူးအတော်ရှက်သွားတယ်။ မင်းကို အရေးယူမယ်လို့ ပြောသံကြားတယ်'' လို့ သူ မျက်နှာမသာမယာနဲ့ ပြောတယ်။ ကျနော်က
''ယူပစေ၊ ဂရုမစိုက်ဘူး။ ဒီကိစ္စ ကျနော်လုံးဝမမှားဘူး။ သူတို့လည်းမှားသေးတယ်။ ကျနော်လည်း အရေးယူခံရ အုံးမယ်ဆိုတော့ ဒါလုံးဝ သဘာဝမကျဘူး။ ကျနော်ရတဲ့နည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်မယ်'' လို့ပြော လိုက်တော့ ဆရာကြီးက ''ဖြစ်စဉ်ကတော့ မင်းမမှားဘူးဆိုတာ ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က လုပ် ပိုင်ခွင့် ရှိနေတော့ အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်။ ပြဿနာတစ်ခုက မှန်ရုံတင် မပြီးသေးဘူးလေ။ လုပ်နည်း လုပ်ဟန် လိုသေးတာ ကိုး။ ညကဆို ငါအတော်စိုးရိမ်သွားတယ်။ မင်းကို သူတို့ထုတ်ရိုက် ကြတော့ မှာလား။ စစ်ခွေးတိုက်ပဲ ပို့ပစ် လိုက်တော့မှာလားလို့ ပူမိတယ်။ ငါပြောချင်တာက ပြဿနာကို ဒေါသနဲ့ မဖြေရှင်းပါနဲ့။ ဒေါသပါရင် ကိုယ့်ဘက်က မှန်နေဦးတော့ ကွဲစရာရှိရင် ကိုယ်ကကွဲမှာ။ ပြီးတော့ ကိုယ်က လက်မဲ့၊ သူတို့က လက်ရှိ၊ ဒါကြောင့် .. '' သူ့စကားမဆုံးသေးဘူး၊ ကျနော်ကဖြတ်ပြီး ''ကွဲပစေ..ကြိုက်သလောက်ကွဲ..ကျနော် ဘက်ကမှန်နေသ၍ ကွဲရုံမကဘူး၊ သေမှာတောင် ဂရုမစိုက် ဘူး။ ပြောသမျှမှားမှားမှန်မှန် ခေါင်းငုံခံနေရင် ကျနော်ထောင်ထဲတောင် ရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား ကျောင်းတက်ပြီး အေးအေးလူလူနေလို့ရတယ်။ မမှန်တာကြီးကို ခေါင်းငုံ့ မခံနိုင် လို့ ထောင်ထဲရောက်လာတာ။ အကျဉ်းသားလာ ဖြစ်နေရတာ။ လက်ညှိုးထောင်၊ ခေါင်းညိမ့်၊ ပေးတာ ယူ၊ ကျွေးတာစားတွေအထဲ ကျနော်မပါဘူး”လို့ ဒေါသစိတ်နဲ့ ပြန်ပြောချလိုက်တယ်။ ဆရာကြီးမျက်နှာ တချက်မဲ့ခနဲဖြစ်သွားတယ်။
ကျနော်ကို သေသေ ချာချာစိုက်ကြည့်ပြီး ''မင်းက အကဲဆတ်လွန်းတယ် ကွာ၊ ခုကိစ္စမင်းမှားတယ်လို့ ငါမပြောသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဖြေရှင်းပုံက ပရိယာယ်မဲ့ရာကျလွန်းတယ်။ အရာရာထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေလို့ အကျိုးမရှိဘူး။ တချို့ကိစ္စ တွေမှာ နောက်တစ်လှမ်းဆုတ်တယ် ဆိုတာ အရှုံးပေးတာမဟုတ်ဘူး။ လိုအပ်ရင် နောက်ထပ်ဆုတ်ချင် ဆုတ်ရဦးမယ်။ အဲဒါအောင်မြင် ဖို့အတွက် ကိုယ့်ကို ကိုယ်ပြင်ဆင်တာပဲ။ မလိုအပ်ဘဲ အထိအခိုက်မဖြစ်အောင် ရှောင်တဲ့သဘောပဲ'' လို့ သူ့အသံကို ထိန်းပြီးပြောနေတယ်။ ကျနော် ညကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါသတွေ ရုတ်ချည်းပြန်ပေါ်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ရမှာက ဆရာကြီးကို။ သူ့နေရာမှာ တစ်ခြားတစ်ယောက်ဆို သေချာတယ်။ ကျနော့်ရင်ထဲ ရှိတာ ဖောက်ခွဲပစ်လိုက်မိမှာပဲ။ ''ခင်ဗျားတို့လူကြီးဆိုတာတွေ အသက်တွေ ကြီး၊ အဖိုးကြီးတွေဖြစ်လာ တာနဲ့အမျှ သွေးကြောင်လာကြတယ်။ ဟိုဟာရှောင်၊ ဒီဟာရှောင်နဲ့ ရှောင်ရင်း ရှောင်ရင်း ဘာမှလုပ် စရာ မရှိတော့အောင် အနင်းခံနေကြရပြီ။ အဲဒါတွေ ခင်ဗျားတို့တွေဝေနေကြလို့ ဖြစ် တာ။ ခင်ဗျားတို့ တာဝန်ရှိတယ်..'' ဘယ်သို့ ဘယ်ညာဆိုပြီး စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ပြောပစ်လိုက်မှာ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေ ဆရာကြီးကို ကျနော်မပြောဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ရင်ထဲကပြောချင်ခဲ့စကားတွေ မျိုသိပ် ထားရတော့ မျက်နှာကတင်းမာနေမှာ သေချာတယ်။ ဒါကိုဆရာကြီးရိပ်စားမိတယ်နဲ့တူတယ်။ ကျနော့်ပုခုံး ကိုပုတ်ပြီး ''ကဲ..ကဲ မျက်နှာသွားသစ်ရအောင်၊ ပြီးမှ အေးအေးဆေးဆေးပြောတာပေါ့''လို့ပြောတယ်။
ကျနော်လည်း မျက်နှာသစ်ပြီး ဆရာကြီးဆီမသွားတော့ဘဲ တောင်ယာထဲ ဆင်းခဲ့တယ်။ သွားချင်စိတ်၊ ပြောချင်စိတ်လည်း မရှိတော့ဘူး။ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံး ကျနော်မှန်နေရက်နဲ့ ဆရာကြီးနားမလည်နိုင်တာ ကို ဝမ်းနည်းနေတာ။ ခဏနေတော့ ဆရာကြီး ရုံးခန်းထဲက ပြန်ထွက်လာပြီး ကျနော်ရှိရာ တောင်ယာ ထဲလိုက် လာတယ်။ သူ့မျက်နှာက မနက်တုန်းကလို ညှိုးမနေတော့ဘဲ ဝမ်းသာတဲ့အရိပ်အယောင် တွေ တွေ့နေရတယ်။ ကျနော့်ကိုတွေ့တွေ့ချင်း ထုံးစံအတိုင်း ''ဟေ့..ခွေးကောင်..လာ ..မင်းငါ့အခန်း ပြောင်းလို့ ရပြီ။ ခုပဲထောင်မှူးကပြောင်းခွင့်ပြုလိုက်တာ'' ဆိုပြီး တကယ့်ကို ဝမ်းဝမ်းသာသာနဲ့ ပြော တာပါ။ ကျနော့် စိတ်ထဲ ထင့်ကနဲဖြစ်သွားတယ်။ ထောင်မှူးစောထွန်း အညှာကိုင်လိုက်ပြီပဲ။
ထောင်မှာ အပြစ်ပေးတဲ့ပုံစံ အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ အခန်းပြောင်းပြစ်ဒဏ်၊ အဆောင်ပြောင်းတိုက်ပိတ်၊ ဒေါက်၊ ခြေကျင်း ခတ်ဆိုပြီး ပြစ်ဒဏ်တွေရှိတယ်။ အခု ကျနော့်ကို အခန်းပြောင်းပြစ်ဒဏ်ဆိုပြီး လုပ်ချ လိုက်တာပဲ။ ဒါ သဘာဝမကျဘူး။ တကယ်ဆို ကျနော်တို့အခန်းပြောင်းပြီး ဆရာကြီးနဲ့တူတူနေဖို့ နှစ်ယောက်လုံးအကြိမ်ကြိမ် တင်ပြခဲ့ဖူးပြီပဲ။ ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး။ ခုကျမှ သူ့ကိုပြန်ပြောလို့ ပြစ်ဒဏ်ခတ်တဲ့ အနေနဲ့ အခန်းပြောင်း ဆိုပြီး လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲ။ ဒါကို ကျနော် လက်သင့်ခံလို့ မဖြစ်ဘူး။ ဆရာကြီးကတော့ ရိုးရိုးလေးတွေးပြီး ကျနော်တို့အတူနေခွင့် ရလို့ ဝမ်းသာနေတာ။ ကျနော်အခန်း မပြောင်းတော့ဘူးလို့ ပြောလိုက်တော့ ဆရာကြီး အံ့အားသင့်သွားတယ်။ ဘာလို့လဲလို့ မေးတယ်။ ခုနက ကျနော်စဉ်းစားခဲ့သလို ကျနော်မြင်တဲ့ရှုထောင့်ကနေ အကျိုးအကြောင်း ရှင်းပြလိုက်တယ်။ ဆရာကြီး ခဏငြိမ်သွားတယ်။ ပြီးမှ ''မဟုတ်ဘူးလေကွာ။ အခုဟာက သူ့ ဟာသူ ဘယ်လိုပဲလုပ်လုပ် မင်းနဲ့ငါ အတူနေချင်တာ နေခွင့်ရပြီလေ။ လက်ငင်းအကျိုးပဲ။ အခန်းပြောင်းဖို့ သာ လုပ်ပါကွာ'' တဲ့။ ကျနော်စိတ်ထဲ ကြေကွဲသွားမိတယ်။
''မဟုတ်သေးဘူးဆရာကြီး။ ကျနော်မမှားဘဲ အပြစ်ဒဏ်နဲ့ အခန်းပြောင်းရတာမျိုးက အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။ အများအမြင်မှာ ထောင်မှူးကို ပြန်ပြောလို့ အပြစ်ဒဏ် ခံရတယ်ဆိုတာမျိုးက အလားအလာ မကောင်းဘူး။ နောက်ဆို ကိုယ့်ဘက်ကမှန်နေရက်နဲ့ ဘာ မှ ပြန်မပြောရဲဘဲ ခေါင်းငုံခံနေရမယ့်ကိန်း ဆိုက်နေပြီ။ ဒါကြောင့် ကျနော်မပြောင်းနိုင်ဘူး။ အဲလိုမပြောင်း လို့ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေ အတွက် ကျနော်ခံမယ်'' လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ''မင်း ရှုထောင့်က ကြည့်ရင်မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုဟာက ပြစ်ဒဏ်နဲ့ ပြောင်းတာလို့ဆိုရင်တောင် တို့ဘက်က အတူနေခွင့်ရတဲ့အကျိုးတောင် ရှိသေးတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး ပြစ်ဒဏ်ခတ်တာဆိုရင်တော့ ထားပါတော့။ တဖက်မှာလဲ ထိပ်တိုက်တိုးမိပြီး အဆောင်ပြောင်း၊ တိုက်ပိတ်၊ ထောင်ပြောင်းဆိုရင် ဘယ်နှယ့်လုပ် မလဲ။ ငါ့ဆန္ဒကတော့ မင်းကို ငါ့မျက်စိရှေ့မှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်တာမျိုးမတွေ့ချင်ဘူးကွာ။ အထူးသဖြင့် တို့တွေမလွတ်မြောက်ခင် မှာအတူတူနေသွားချင်တယ်။ အဲဒါင့ါဆန္ဒပဲ'' တဲ့။ ကျနော်ဆရာကြီးကို ဘာမှာမပြောတော့ဘူး။ မြေကြီး ပေါ်ခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ကျနော့်ရှေ့တည့်တည့်က အုတ်နံရံကိုငေးကြည့်နေမိတယ်။
သူလည်း ဘာမှထပ်မပြောတော့ဘဲ ဒီအတိုင်းထိုင်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော့်အခန်းက အခန်းလူကြီး(တန်းစီး) ရောက်လာပြီး ကျနော့်ကို ထောင်မှူးက အခန်းပြောင်းဖို့ပြောကြောင်း လာပြောတယ်။ ကျနော် ဆတ်ကနဲ တစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီး ''ခင်ဗျားတို့ထောင်မှူးကိုပြောလိုက်။ ကျုပ်အခန်းမပြောင်းနိုင်ဘူးလို့...။ ကျုပ်မမှားဘဲနဲ့ ပြစ်ဒဏ် ခတ်တာမျိုးဆိုရင် မခံဘူး။ ကြိုက်တဲ့နေရာတင် ကျုပ်ရင်ဆိုင်မယ်။ ခင်ဗျား ထောင်မှူးကို အဲဒီ အတိုင်းသတင်းပို့လိုက်'' လို့ ခပ်မာမာပြောလွှတ်လိုက်တယ်။ တန်းစီးလည်း ဘာမှမပြောဘဲ လှည့်ပြန်သွားတယ်။ ဆရာကြီးက သူ့နောက်လိုက်သွားဖို့ဟန် ပြင်နေတာနဲ့ ကျနော်က ''ဆရာကြီး လိုက်မသွားနဲ့။ ဒီကိစ္စ ဆရာကြီးသက်သာသလိုနေပါ။ ဖြစ်သမျှ ကျနော်ရင်ဆိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ'' လို့ ပြော လိုက်တယ်။ ဆရာကြီးက လောလောဆယ် စိတ်လိုက်မာန်ပါမဆုံးဖြတ်ဖို့၊ အခုရေချိုးပြီး အေးအေးဆေးဆေးနေဖို့၊ နေ့လည် (၂)နာရီ တန်းဖွင့်မှ ဆက်ပြောကြဖို့ပြောပြီး သူ့အခန်း ပြန်သွားပါတယ်။
ကျနော်လည်း ရေချိုးထမင်းစားပြီး တနေ့လည်လုံး အပြန်ပြန်အလှန်လှန်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ ဖြစ်စဉ် တခုလုံးကိုခြုံကြည့်ရင် ကျနော့်ဘက်က လုံးဝမမှားတာသေချာတယ်။ တခြားရဲဘော်တွေကလည်း ကျနော်မှန်ကြောင်း၊ အခန်းမပြောင်းသင့်ကြောင်း၊ ဒီအတိုင်းတောင့်ခံထားသင့်ကြောင်း ဝိုင်းပြော ကြတယ်။ ခက်နေတာက ဆရာကြီး။ သူက တခြားကိစ္စတွေမှာသာ ဝင်ပါလေ့မရှိတာ။ အခုကိစ္စ ကျနော်နဲ့တိုက်ရိုက် ပတ်သက်နေတော့ သူကိုယ်တိုင် ထောင်မှူးနဲ့စကားပြောပြီး ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်ပတ်သတ်နေတယ်။ သူ ကျနော့် အပေါ် ဘယ်လောက်သံယောဇဉ်ကြီးတယ်။ စေတနာကြီးတယ် ဆိုတာ ကျနော့်နှလုံးသားထဲက သိနေ တယ်။ ကျနော့်အကျိုးအတွက် ခုလို သူဝင်ပါနေတယ် ဆိုတာ လည်း ကျနော်သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တဖက်က အမှန်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စ၊ မတရားမှုကို ခေါင်းငုံမခံဘဲ တွန်းလှန်နေတဲ့ကိစ္စ၊ နောက်ပြီး ဒါဟာ ကျနော် တစ်ဦးတည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်လောက် မှန်မှန် ထောင်အာဏာပိုင်ကို ခံပြောရင် ပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ အစဉ်အလာဖြစ်သွားမှာ စိုးရတယ်။ ပိုဆိုးတာက ဒီထက်ပိုတဲ့အပြစ်ဒဏ်ခံရမှာကြောက်လို့ အခန်းပြောင်းပြစ်ဒဏ်ပဲ ကျေကျေနပ်နပ် ခံယူသွားတယ်လို့ အမြင်ခံရမယ့်သဘောရှိနေတာပဲ။ စဉ်းစားရင်း စဉ်းစားရင်းနဲ့ ''အမှန်တရားနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ'' ကတဖက်၊ ''မေတ္တာတရား''ကတဖက် အပြင်းအထန်လွန်ဆွဲ နေတယ်ဆိုတာ တွေ့ရ တယ်။
''ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ငါမပြောင်းဘူးကွာ။ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်စမ်း'' ဆိုပြီး ဆုံး ဖြတ်ကြည့်တယ်။ ဆရာကြီးမျက်နှာ ဘွားကနဲပေါ်လာတယ်။ ဒီလိုဆို သူအကြီးအကျယ် စိတ်ထိခိုက်သွား နိုင်တယ်။ ကျနော် ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ ခေါင်းထဲလဲ ထူပူပြီး ရှုတ်ယှက်ခတ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ကျနော်အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ ရင်ထဲက ဆစ်ခနဲပူသွားတာ အမှန်ပဲ။ ထာဝရအမှန်တရားမဟုတ်တဲ့ သမုတိအမှန်တရားနဲ့ မေတ္တာတရား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရ တဲ့ပွဲမှာ ဘယ်ဖက်ကိုအလေးပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုး အဲဒီတုန်းကချမှတ်နိုင်ခဲ့တာ အခုပြန်တွေးကြည့် တော့ ကိုယ့်ကို ကိုယ်တောင် အံ့သြမိတယ်။
နေ့လည် (၂) နာရီ တန်းဖွင့်တော့ ကျနော်ဆရာကြီးစီ တန်းတန်းမတ်မတ်သွားလိုက်တယ်။ ဆရာကြီး က အိပ်ယာထဲလှဲနေတုန်းရှိသေးတယ်။ ကျနော့်ကိုမြင်မှ ထထိုင်လိုက်တယ်။ သူစကားစ ရှာရင်း ကျနော်မျက်နှာကို လှမ်းအကဲခတ်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကျနော်က ''အခန်းပြောင်းဖို့ ကျနော် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ'' လို့ ဗြုန်းစားကြီးပြောချလိုက်တော့ သူအံ့သြလွန်းလို့ နှုတ်ကတောင် ''ဟေ''လို့ ထွက်သွားတယ်။ မျက်နှာလည်း ဝင်းကနဲဖြစ်သွားပြီး ''ခွေးကောင်..ငါဝမ်းသာတယ် ..အခုပဲ ပြောင်း တော့ကွာ''တဲ့။ သူအံ့သြမယ်ဆိုလဲ အံ့သြလောက်တယ်လေ။
နောက်မှ သူပြန်ပြောလို့သိရတာ တစ်နေ့လည်လုံး သူစဉ်းစားကြည့်တာ ကျနော် အခန်းပြောင်းမယ့်ပုံ လုံးဝမရှိဘူး။ အသက် (၁၆) နှစ်လောက်နဲ့ မိဘအသိုင်းအဝိုင်းကို ကျောခိုင်းပြီး တောခိုသွားတဲ့သူ၊ ခေါင်းမာမာနဲ့ ကိုယ်မှန်တယ် ထင်ရာစွတ်လုပ်မယ့်သူ၊ ခုလည်း မှန်တယ်လို့ ရပ်ခံထားပြီး လုံးဝလျှော့မယ့်အရိပ်အရောင်မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် (၂)နာရီထိုးရင် ပြစ်ဒဏ်နဲ့ပြောင်းတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျနော့်ကိုခေါ်ပြောဖို့ ထောင်မှူးကို သွားပြောမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတာတဲ့လေ။ အခုကျမှ ကျနော်က ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် အခန်းပြောင်းတော့မယ့်လို့ပြောတော့ သူအံ့သြသွားရ တော့တာပေါ့။ ''ကျနော်အခန်း ပြောင်းဖို့တော့ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။ ဒါပေမဲ့ ထောင်မှူးစောထွန်းနဲ့ သွားတွေ့ပြီး စကားတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်း သွား ပြောဦးမယ်'' လို့ပြောတော့ ဆရာကြီးက ''ငါလည်းလိုက်တွေ့မယ်'' ဆိုပြီး ပြောပြောဆိုဆို ကျနော့်နောက် က လိုက်လာတယ်။ ကျနော်က မလိုက်ခဲ့ဖို့၊ ကျနော်ဖာသာ ကျနော်သွားပြောမယ်ဆိုတာ မရဘူး။ နောက် က အတင်းလိုက် လာတယ်။
ထောင်မှူးရုံးခန်းထဲဝင်တော့ ထောင်မှူးက ကျနော့်ကိုကျော်ကြည့်ပြီး နောက်ကဝင်လာတဲ့ဆရာကြီးကို ''ဦးတင်မိုး..လာထိုင်ပါ။ ဘာပြောစရာ ရှိလို့လဲ'' လို့မေးတယ်။ တစ်ခုခုဖြစ်မှာစိုးလို့သာ ဆရာကြီးက ကျနော့်နောက်လိုက်လာတာ။ ကျနော်ဘာပြောမယ်ဆိုတာ သူမသိဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ကျနော်နဲ့ ထောင်မှူး ကို တလှည့်စီကြည့်ပြီး ယောင်နနဖြစ်နေတယ်။ ''ပြောမှာက ကျနော်ပါ။ တခြားမဟုတ်ဘူး။ ခု ကျနော့်ကို အခန်းပြောင်းဖို့ ထောင်မှူးကပြောတယ်လို့ သိရတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မနေ့ညက ကျနော်ထောင်မှူး ကိုပြန်ပြောလို့ ပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ အခန်းရွှေ့တဲ့သဘောလို့ ကျနော်ယူဆတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ပြောင်းမှာပါ။ ဒါကမပြောင်းဘဲနေရင် ဖြစ်လာစရာရှိတဲ့အကျိုးဆက်တွေကို စိုးရိမ်လို့၊ ကြောက်လို့ပြောင်းပေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ မနေ့ညကဖြစ်တဲ့ကိစ္စကလည်း ကျနော့်ဘက်က မှားတယ်လို့ လုံးဝမယူဆဘူး။ အခု ကျနော့်ရှေ့က ဆရာသမားလို၊ မိဘလို ဆရာကြီးတင်မိုးရဲ့ မျက်နှာကိုထောက်ပြီး အခန်းပြောင်းပေးလိုက်တာပဲ။ ကျနော်ပြောချင်တာ ဒါပါပဲ'' လို့ပြောပြီး ရုံးထဲကတန်းထွက်လာခဲ့တယ်။ ထောင်မှူးက နေပါဦး၊ ဘာညာနဲ့ပြောနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်နောက်လှည့်မကြည့်တော့ဘူး။ တန်းထွက်လာခဲ့တယ်။ ဆရာကြီးကတော့ ကျန်ခဲ့ပြီး စကားစမြည် ပြောနေပါသေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆရာကြီးနေတဲ့ (၃) ခန်းကို ရောက်သွားပြီး သူနဲ့ဘေးချင်း ကပ်အိပ်ရတယ်။ အခုဒီအကြောင်းကို ပြန်ပြောတော့ ဆရာကြီးရဲ့မေတ္တာကို ကျနော်အသိအမှတ်ပြု ခဲ့ပါလားဆိုတဲ့အသိနဲ့ ရင်ထဲနွေးနွေးလေး ခံစားလိုက်ရတယ်။
(၅) ဆောင် (၃) ခန်းမှာနေရင်း ဆရာကြီးနဲ့ကျနော်ကြားမှာ အမှတ်ရစရာလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီနေ့က ၁၉၉၄၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့ည။ ၁၉၉၅နှစ်သစ်ကို ကြိုဖို့ ဆရာကြီးနဲ့ ကျနော်တို့ ဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောနေကြတယ်။ ကျနော်က ''ဆရာကြီးချောင်းတွေအရမ်းဆိုးနေတယ်။ ဆေး လိပ်ဖြတ်ပါလား''လို့ ကောက်ခါငင်ကာ ပြောလိုက်မိတယ်။ သူ နဲနဲတွေသွားတယ်။ ''အေး..ငါ့ အမျိုး သမီး ရှိတုန်းကကော၊ သမီးတွေကကော အားလုံး ငါ့ကို ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ချည်း ပြောကြတယ်။ ငါက ဆေးလိပ်နဲ့လက်ထပ်ပေါင်းသင်းလာတာ နှစ်ပေါင်းကြာလှပြီကွ။ ဖြတ်ဖို့လည်း အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစား ကြည့် ပါသေးတယ်။ မရဘူး။ ဆေးလိပ်မကောင်းဘူးဆိုတာ သိတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီး သူတိုင်းကို ဆေးလိပ်မသောက်ဖို့ အမြဲပြောတာပဲ။ ငါကတော့ စွဲနေပြီ ဖြတ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး'' လို့ ပြောပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း မလျှော့သေးဘူး.. ''ဆရာကြီးစကားကို ကျနော်အမြဲလိုလို နားထောင် ခဲ့တယ်နော်။ ဒီ အခန်းပြောင်းတဲ့ကိစ္စဆို အထင်အရှားပဲ။ ဘေးကြပ်နံကြပ်ကိစ္စမှာ ဆရာကြီးစိတ် ထိခိုက်မှာစိုးလို့ ဒီပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဆရာကြီးသိပါတယ်။ အခုလည်း ဆရာကြီးရဲ့ကျန်းမာရေး ကို ရှေ့ရှုပြီး ကျနော်တောင်းဆိုတာကို ဆရာကြီးအသိအမှတ်ပြုသင့်တယ်။ ခုတလော ဆရာကြီး ဆေးလိပ်တအားသောက်တယ်။ ဘယ်ခါ ကြည့်ကြည့် လက်ကြားထဲ ဆေးလိပ်ညှပ်လျှက်ပဲ။ ဒီအတိုင်း ဆို ဆရာကြီးရဲ့ကျန်းမာရေးမလွယ်ဘူး။ ခု တောင် ချောင်းတွေတအားဆိုးနေပြီ'' လို့ ထပ်ပြောလိုက် တော့ သူက ''သမီးတွေလည်း ထောင်ဝင်စာ လာတိုင်းဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ပြောတယ်။ ငါလည်း ဖြတ်ဖို့ စဉ်းစားနေတာပဲ။ အခြေအနေပေးရင် ဖြတ်ကြည့်တာ ပေါ့''တဲ့။
''ဟာ..ဆရာကြီးကလည်း အခြေအနေ ပေးရင်ဆိုပြီး စောင့်နေရင် ဖြတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ ဒီနေ့ဆို (၉၄)ရဲ့နောက်ဆုံးညပဲ။ (၉၅)နှစ်သစ် ရောက်ဖို့ နာရီပိုင်းပဲလိုတော့တာ။ ဒီတော့ အမှတ်တရအနေ နဲ့စဖြတ်ရင် မကောင်းဘူးလား''လို့ ကျနော်ကပြောတော့ ဘေးနားက ကိုအောင်ထွန်း (မ/ဥက္ကလာ)၊ ဝေမိုးနဲ့ တခြားရဲဘော်တွေက ကောင်းတယ်လို့ဝိုင်းပြောကြတော့ နောက်ဆုံး ဆရာကြီး ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ သဘောတူလိုက်တယ်။
''(၉၄) မကုန်ခင်သောက်မယ်ကွာ။ ည (၁၂)နာရီကျော်ပြီး ဟိုဘက်နှစ်သစ်ရောက်ရင် မသောက် တော့ဘူး'' လို့ပြောပြီး ဆေးလိပ်စဖြတ်ပါတော့တယ်။ တကယ်ဆို ဆရာကြီးဟာ သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်း တယ်။ သူ့သမီးတွေဆန္ဒကိုဖြည့်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်အားယူနေတဲ့အချိန်မှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျနော် ကလည်း တွန်းအားတစ်ရပ်ပေးမိရက်သားဖြစ်သွားတော့ သူ သိပ်ကြိုက်တဲ့ဆေးလိပ်ကို ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ တာလေ။ အဲဒီရက်တွေအတွင်း ဆရာကြီး သိပ်သနားဖို့ကောင်းတယ်။ အရင်လို ရွှင်ရွှင် လန်းလန်းမရှိဘူး။ ငေါင်နေတတ်တယ်။ သူအရမ်းကို ခံရခက်နေတာလေ။ ကျနော်ကိုတွေ့တိုင်း ဆေးလိပ်ဖြတ်တာ ဘယ်နှစ် ရက်ရှိပြီနော်၊ ဘာညာနဲ့ပြောတတ်တယ်။ ထောင်ဝင်စာတွေ့ပြီး ပြန်လာ တော့လည်း သူဆေးလိပ်ဖြတ်တာ သမီးတွေအရမ်းဝမ်းသာနေကြတယ်ဆိုပြီး တခုတ်တရပြောတတ် သေးတာ။ ဒါပေမဲ့ သူအရမ်းခံစားနေရတာ သိသာတယ်။
ကြိတ်မှိတ်ခံနေတာသိလို့ တစ်ခါတော့ ကျနော်က ''ဆရာကြီးအရမ်းခံစားနေရရင် အာရုံ ပြောင်းသွားအောင်ကွမ်းလေးဘာလေးငုံပါလား။ မြန်မာအဖိုးကြီး၊ အဖွားကြီးတွေ ကွမ်းတမြုံ့မြုံ့နဲ့ ကျန်းမာနေကြတာပဲ။ ဆေးလိပ်နဲ့စာရင် ကွမ်းက အန္တရာယ်ကင်းလောက်ပါတယ်လို့ ပြောမိတော့ ဆရာ ကြီးက ''ဟာ..ခွေးကောင်.. ငါ..သွားတစ် ချောင်းမှမရှိဘဲ ဘယ်လိုကွမ်းဝါးရမလဲ''လို့ ပြောတော့ ဝိုင်း ရယ်ကြရသေးတယ်။ ဆရာကြီးသွားတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်တာလဲ၊ ဘာလို့ပြန်မစိုက်ဘဲ ဒီအတိုင်းထားရ တာလဲလို့ ကျနော်တစ်ခါက သူ့ကိုမေးဖူးတယ်။ ''မင်းလိုကောင်တွေ ငါ့ဒုက္ခပေးသွားကြတာကွ။ သွား ကောလိပ်ကျောင်းသား တွေပေါ့။ သူတို့လက်တည့်စမ်းချင်တာလား မသိပါဘူး။ ငါ့တွေ့တိုင်း ဆရာ့သွား တွေမကောင်းဘူး။ ကျနော်တို့နှုတ်ပေးမယ်၊ ပြီးမှ ပြန်စိုက်ပေးမယ်၊ ရှယ်လုပ်ပေးမယ်ချည်းပြောနေကြတာ၊ ငါလည်း အဟုတ်မှတ်တာပေါ့။ နှုတ်ပေါ့လေ။ ပြီးတော့ ဒီကောင်တွေကျောင်းဆင်းလို့ နယ်တွေရောက်သွားကြပြီး တကောင်မှပြန်ပေါ်မလာကြဘူး။ အဲဒီလိုတစ်ယောက်ကလာနှုတ်လိုက်၊ ပြန်စိုက်ပေးမယ် ပြောပြီး ပျောက်သွားလိုက်နဲ့ ငါ့သွားတွေသာ ကုန်သွားတယ်။ ခွေးကောင်တွေ ဘယ်ရောက်ကုန် တယ်မသိဘူး။ ငါ လည်းသွားစိုက်ဖို့ သူတို့ကိုတမျှော်မျှော်နဲ့ ထောင်ထဲရောက်လာတဲ့အထိ မင်းအမြင်ပဲ ။ တစ်ချောင်းမှကို မရှိ တော့ဘူး'' လို့ရယ်ရယ်မောမောပြောဖူးတယ်။
ဆရာကြီးက အဲဒီလိုလူစားမျိုးပါ။ ကျနော်နဲ့နေစဉ်တလျှောက် တစ်ခါမှဒေါသထွက်တာမတွေ့ခဲ့ဖူးဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မကောင်း ပြောတာမကြားခဲ့ရဖူးဘူး။ သူ စွဲစွဲမြဲမြဲလက်ကိုင်ထားတဲ့ဝါဒက ''အကောင်းမြင်'' ဝါဒလေ။ ဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့လူဖြစ်ပါစေ ကောင်း ကွက်တော့ ရှိစမြဲပဲလို့ သူကခံယူထားတာ။ သူသူငါငါ ရှာတွေ့ ဖို့ခက်တဲ့ အဲဒီ့ မဆိုစလောက် ကောင်းကွက် လေးကို သူကအမြဲရှာတွေ့တတ်စမြဲပဲ။ ဒါကြောင့် ထင်ပါ ရဲ့။ ကျနော့်လိုဂျစ်ကပ်ကပ်၊ ခပ်ရိုင်းရိုင်း၊ ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်ကို သူလာပြီး သံယောဇဉ်ဖြစ်နေတာနေမှာ။ နောက် ဆရာကြီးရဲ့ထူးခြားချက်က မျက်လုံးပဲ။ ကျနော့်အထင်ပါ။ သူ့မျက်လုံးက အပြစ်ကင်းတဲ့ ကလေး လေး တယောက်ရဲ့မျက်လုံးတွေလိုပဲ၊ ရွှင်လန်း တက်ကြွနေတတ်တယ်။ အရောင်လက်နေ ပြီး တစ်ခုခုကိုအမြဲစူးစမ်းနေတတ်တဲ့မျက်လုံးတွေ။ ဆံပင်တွေ ဖြူ၊ သွားတွေတစ်ချောင်းမှမရှိလို့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအိုမင်းရင့်ရော်နေပေမဲ့ ဆရာကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေက အမြဲနုဖပ်၊ ပြုံးရွှင်၊ ချိုမြ နေတတ်တာ။ ဆရာကြီးကွယ်ရာမှာ ရဲဘော်တချို့က အောင်ထွန်းလေးလို့ ချစ်စနိုး ခေါ်ကြသေးတယ်။ အဲဒီလိုခေါ်ကြတဲ့အကြောင်း ကျနော်ကပြောပြတော့ သူက စိတ်မဆိုးဘဲရယ်တောင် နေလိုက်သေး တယ်။
တခါတလေ သူရေချိုးတာနဲ့ကြုံရင် ကျနော်က 'ဂျီး' တွန်းပေးတတ်တယ်။ သူ့ဗိုက် က ဖောင်းဖောင်းကားကားကြီး။ အဲဒီဗိုက်ကြီးရဲ့ခလယ်တည့်တည့်မှာ စူထွက်နေတဲ့ ''ချက်''ကြီး ရှိတယ်။ ဘုသီးကြီးတစ်ခုတင်ထားသလိုပဲ။ ကျနော်က ဆရာကြီးကိုစချင်ရင် အဲဒီချက်ကြီးကို လက်ညှိုးနဲ့ ဖိတွန်းပြီး ကလိသွားထိုးတယ်။ အဲဒီအခါတွေဆို ဆရာကြီးက ''ဟာ..ဟေ့ကောင်..ခွေးကောင် ..ယားတယ် မ လုပ်နဲ့'' ဆိုပြီး အော်ဟစ်နေတော့တာ။ ကျနော်က ရယ်ပေါ့။ ဆရာကြီးက အရမ်းယား တတ်တာ။ သူ့ဗိုက် ကြီးကို လက်နဲ့သွားထိမိရင် ယားလို့ တွန့်ခနဲဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ သူ့ကို ဘယ်သူမှ မစကြပါဘူး။ ကျနော်ပဲ အဲဒီလိုကလိထိုး သွားသွားစတာ။ သူ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်တာကို ကြည့်ချင်လို့။ သူအဲဒီလို ရယ်ရင် မျက်လုံးနှစ်လုံးကပိတ်ပြီး ပျောက်သွားရော။ သွားတွေတစ်ချောင်းမှ မရှိတဲ့ပါးစပ်ကြီးက ဟလို့၊ တကယ့်ကို ချစ်စရာကြီး။ တစ်ခါတစ်လေ ကျနော်က ''ဆရာကြီး ကျနော်ကလေးမှမဟုတ်တော့တာ..'' လို့ပြောတော့ သူက ''ဘာရှက်စရာလဲကွ။ မင်းနဲ့ငါက သားအဖ၊ မြေးအဖိုးအရွယ်ပဲ'' လို့ပြန်ပြောတတ် တယ်။ ကျနော်က ''ဒါဆို ဆရာကြီးရဲ့ချက်ကြီးကို လည်း ကျနော့်လက်နဲ့အတင်းဖိမယ်'' လို့ပြောတော့ ''ဟာ..ခွေးကောင်'' ဆိုပြီး ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်နေတော့တယ်။ တကယ့်ကိုဖြူစင်ပြီး ချစ်စရာကောင်း တဲ့ဆရာကြီးပါ။
နောက် သူနဲ့ကျနော့် ကြားမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်မှုက ကျနော်ထမင်းစားနေတာနဲ့ကြုံရင် ကျနော့်ထမင်းပန်းကန်ထဲက တစ်လုတ်၊ နှစ်လုတ် ဇွန်းနဲ့ခပ်စားတတ်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေလည်း ကျနော် က လက်နဲ့ခွံ့ပေးရ တယ်။ ဘာဟင်းနဲ့စားစား ကောင်းကောင်း၊ မကောင်းကောင်း ကျနော်ထမင်းစားတာနဲ့ ကြုံလို့ကတော့ အနည်းဆုံးတစ်လုတ်လောက်စားလိုက်ရမှ ကျေနပ်တာ။ သူထမင်းစားတာနဲ့ကြုံရင်လည်း ကျနော်ကို ''ခွေးကောင်..လာဆိုပြီး'' အတင်းခွံ့ကျွေးတော့တာပဲ၊ မစားချင်ဘူးပြောလည်းမရဘူး။ အထူးသဖြင့် ဟင်းကောင်းတဲ့နေ့တွေဆို အတင်းကိုကျွေးတော့တာ။ အထဲမှာသိတဲ့အတိုင်း ''ကိုယ်တာ''နဲ့စားရ တော့ ဟင်းနည်းသွားမှာစိုးလို့ ကျနော်ငြင်းရင်မရဘူး။ အနည်းဆုံးတစ်လုတ်လောက်စားလိုက်မှ သူ ကျေ နပ်သွားတာ။ ကျနော်တို့အပြင်မှာ ပြန်ဆုံကြတော့ ''ငါအစားကောင်းစားတဲ့အခါတိုင်း မင်းကိုသတိရ တယ် ကွာ'' လို့ပြောခဲ့ဖူးတယ်။
အဲဒီလိုဆရာကြီး ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီး (၁)လလောက်ရှိတော့ တစ်နေ့မှာ ကိုအောင်ထွန်း (မ/ဥက္ကလာ)က ဆရာကြီးဆေးလိပ်ပြန်သောက်နေတာသိလားလို့ ကျနော့်ကို လာမေးတယ်။ ကျနော်တောင်ယာ လုပ်ရင်း တန်းလန်းကြီးဆိုတော့ လက်တွေခြေတွေမှာလည်း ရွှံ့တွေပေနေတယ်။ ကျနော်ကမသိ ပါဘူးပေါ့။ ကျနော် နဲ့အတူနေတာ ကျနော်သိတာပဲ။ သူပြန်မသောက်ပါဘူးလို့ ပြန်ပြောလိုက်တော့ ကိုအောင်ထွန်းက မယုံ ရင် ဟိုး ..ပြတင်းပေါက်နားမှာသွားကြည့်တဲ့။ ကျနော်သွားကြည့်တော့ သူပြောတဲ့နေရာမှာ ဆရာကြီးနဲ့ ကိုအောင်မင်းတို့ထိုင်နေကြတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဆေးလိပ်မီးခိုးတွေ တွေ့နေရတယ်။ ဒါပေမဲ့ မီးညှိထားတဲ့ဆေးလိပ်က ကိုအောင်မင်းလက်ကြားမှာ။
ကျနော့်ကိုတွေ့တော့ ဆရာကြီးက ဘာလဲလို့မေး တယ်။ ကျနော်က ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာကြီး တို့ဘာလုပ်နေတာလဲ လာကြည့်တာလို့ပြောတော့ သူက ဘာလုပ်နေရမှာလဲ။ စကားထိုင်ပြောနေတာ ပေါ့ကွလို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ပြန်ပြောတယ်။ ကျနော့်စိတ်ထဲ မရှင်းဘူး။ ဆရာကြီးကြည့်ရတာ ဆေးလိပ် များ ပြန်သောက်နေပြီလားပေါ့။ ဒါနဲ့ နောက်တစ်နေ့မှာ ဆရာကြီးနဲ့ကိုအောင်မင်းတို့ ထိုင်နေတုန်း နောက်ကနေ တိတ်တိတ်လေးသွားကြည့်တယ်။ အဟုတ်ပဲ။ ကိုအောင်မင်းလက်ထဲ မီးညှိပြီးသား ဆေးလိပ်ကို ဆရာကြီးယူဖွာတယ်။ နှစ်ဖွာလောက်ဖွာပြီး ကိုအောင်မင်း လက်ထဲ ဆေးလိပ်ပြန်ထည့် လိုက်တယ်။ ကျနော်လည်း တိတ်တိတ်ကလေး ဆက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။
နောက်တစ်ကြိမ် သူဖွာတော့ ဗြုန်းဆို ကျနော်ထလိုက်ပြီး ''မိပြီ။ မိပြီ။ ဆရာကြီးဆေးလိပ် ပြန်သောက်နေပြီ''လို့ အော်ပြောလိုက်တော့ ဆရာကြီးခမြာ ရှက်ကိုး ရှက်ကန်းနဲ့ရယ်နေတယ်။ “အေးကွာ။ ငါမနေနိုင် တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုအောင်မင်းဆီက တစ်ဖွာ၊ နှစ်ဖွာ ယူယူဖွာနေတာ'' လို့ပြောရှာတယ်။ ကိုအောင်မင်းကလည်း ''ဟုတ်တယ်၊ ဆရာကြီးက မင်းကိုကတိပေးထားတော့ မင်းရှေ့မှာ ဆေးလိပ်ပြန် သောက်ဖို့ခက်နေတာ။ ဆရာကြီး တော်တော်ခံနေရတယ်။ သောက်ပါစေကွာ။ မများရင်ပြီးတာပါပဲ'' လို့ ဆရာကြီးဘက်က ရှေ့နေလိုက်နေပါသေးတယ်။ ကျန်တဲ့ရဲဘော် တစ်ချို့ကလည်း အဲဒီအတိုင်းဝိုင်းပြောကြ တယ်။ ကျနော်ကလည်း ဆရာကြီးအရမ်းခံနေရတာ သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်ပြောတာ။ သိပ်မနေနိုင်လွန်းရင် သောက်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တတ်နိုင်သလောက် လျှော့သောက်ဖို့ပြောတော့ သူ့မျက်နှာ လက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ ''အေးပါကွာ။ နဲနဲပါးပါးပဲသောက်မှာပါ။ အရင်သောက်နေကျရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံပဲ သောက်မယ်'' လို့ပြောရှာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ဆရာကြီး ဆေးလိပ်ပြန်သောက်ဖြစ်သွားတယ်။ ''သမီးတွေကိုတော့ မသောက်တော့ဘူး ပြောထားတာ ဘယ်လိုပြန်ပြောရမလဲမသိဘူး။ မျက်နှာပူလိုက်တာ'' လို့ငြီးတွားနေပါ သေးတယ်။ ဆရာကြီးက ကိုယ့်သားသမီးတွေကိုတောင် အဲဒီလိုအလေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါ။
ကျနော်နဲ့ဆရာကြီးကြားမှာရှိတဲ့ အထင်ကရအမှတ်တရတစ်ခုက ''ဘာသာရေး'' ကိစ္စပါ။ သိတဲ့အတိုင်း ကျနော်က ကရင်ကပြား၊ ဘာသာတရား သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရှိတဲ့သူ။ ဒါကိုသူက ဘာသာတရားရဲ့ အနှစ် သာရကို နားဝင်အောင် ပြောပြတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လေးနက်ပုံကို ရှင်းပြတယ်။ ဓမ္မစကြာရဲ့ တရားကိုယ်တွေ့ဖြစ်တဲ့ အစွန်းတရားနှစ်ပါးရှောင်တဲ့ အလယ်အလတ် မဇ္ဈိမ ပဋိပဒါ လမ်းစဉ်၊ မဂ္ဂင် (၈) ပါး စတာတွေကို အပ်ကြောင်းထပ်အောင် ပြောပြခဲ့တယ်။ သူအမြဲပြောလေ့ရှိတာ က (၃၈)ဖြာ မင်္ဂလာ တရားတော်ပါပဲ။ အကြိမ်ရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီး သူပြောနေကျကတော့ “စိတ်ရှည်၊ ဇွဲသန်၊ သည်းခံ၊ ဧကန် နိဗ္ဗာန်ရောက်'' တဲ့။ ဒါလေးကို ခဏ ခဏပြောတယ်။ တဖွဖွပြောတယ်။ ကြုံတိုင်းပြောတယ်။ သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတိုင်း ကြားဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ကျနော့်ကိုလည်း ''ပရိတ်'' နဲ့ ''ဓမ္မစကြာ'' ကို ကျက်ဖို့ ခဏ ခဏပြော တာ ကျနော်ကလည်း သိတဲ့အတိုင်း ဂျစ်တီးဂျစ်ကန်ဆိုတော့ မကျက်ဖူးချည်း ပြန်ပြောတာ။ ဒါကို သူက မလျှော့ဘူး။ ကြုံတိုင်းတဖွဖွကျက်ခိုင်းနေတော့တာ။
တစ်နေ့တော့ သူက ''မင်းက ခိုင်ဝတ်မှုန်တို့နဲ့ တစ်တန်းထဲဆိုတော့ (S) ခန်းကပေါ့။ (S) ခန်းဆိုတာ စာတော်တဲ့ကျောင်းသားချည်းထားတာဆိုတော့ မင်းလည်း စာတော်လို့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းစာ ဘယ်လောက် တော်တော် ဘုန်းကြီးစာတွေကိုတော့ မလွယ်ဘူး။ အရမ်းခက်တယ်။ ''ပရိတ်''ထဲက ''ရတနသုတ်'' ဆိုရင် တော်ရုံလူရဖို့မလွယ်ဘူး။ မင်းလည်း ကျက်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ” လို့ ပြောလာ တယ်။ ကျနော်ကလည်း သိတဲ့အတိုင်း မာန်ကခပ်ထောင်ထောင် ဆိုတော့ဘာလို့ မရရမှာလဲ၊ မကျက် ချင်လို့။ ကျက်ရင်ရပြီးသားပဲလို့ မခံချင်စိတ်နဲ့ ပြန်ပြောတော့ ဆရာကြီး က ''ဒါဆိုမင်းနဲ့ငါ လောင်းရ အောင်၊ ရတနသုတ်ကို (၂)ရက်နဲ့ရရင် မင်းလိုချင်တာ တောင်း ငါပေးမယ်။ မရရင် ငါလိုချင်တာ တောင်းမယ်။ မင်းပေး''ဆိုပြီး စိန်ခေါ်ပါလေရော။ ကျနော်ကလည်း မခံချင်တော့၊ ရတယ်။ ကျက်မယ် ဆိုပြီး သူလောင်းကြေးကို သဘောတူလိုက်တယ်။
တကယ် ကျက်တော့မချောင်ဘူး။ ကျနော်က 'သြကာသ'တောင် ဖြောင့်အောင်ရွတ်တတ်တဲ့သူ မဟုတ်တော့ ခက်နေပြီ။ ပါဠိဆိုတာလည်း ကိုယ်နဲ့ ယဉ်ပါးတာမဟုတ်တော့ အသံထွက်ဖို့တောင် မလွယ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆရာကြီးက အသံချပေးပါတယ် ဒီလိုနဲ့ (၂)ရက်လုံးလုံး ဘာမှမလုပ်ဘဲ ထိုင်ကျက်၊ ထကျက်၊ လှဲကျက်နဲ့ တတွတ်တွတ်ရွတ်နေရတယ်။ ဆင်တူအပိုဒ်တွေပါလို့ ရှေ့ကရလိုက်၊ နောက်ကမေ့လိုက်နဲ့ ချာလပတ်ကိုလည်နေတော့တာပဲ။ ဒါပေမဲ့(၂)ရက်ပြည့်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်ရသွားပါတယ်။ ကျနော့်ဘဝမှာ ဘုရားစာ နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပထမဆုံးရတာလို့ ဆိုရမယ်။
လောင်းကြေးနိုင်သွားတဲ့အတွက် ဆရာကြီးက ကျနော့်ကို လိုချင်တာတောင်း၊ သူပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ တကယ်က ကျနော်တစ်ခုခုလိုချင်လို့ ကျက်တာမှ မဟုတ်ဘဲ။ မခံချင်လို့ကျက်ခဲ့တာလေ။ ဒါကြောင့် ကျနော်ဘာမှမတောင်းပါဘူးလို့ပြော တော့ ဆရာကြီး က ''မင်းမတောင်းလဲ ငါကဂုဏ်ပြုရမှာပဲ''ဆိုပြီး သူ့ထောင်ဝင်စာထဲက အကောင်းဆုံးမုန့် တွေကို ချကျွေးပါတော့တယ်။ ကျနော်နဲ့အတူ ရဲဘော်တွေဝိုင်းစားကြရင်း ဆရာကြီးက ''ဒီကောင်တော် တယ်၊ ဥာဏ်လည်းကောင်းတယ်'' ဆိုပြီး ချီးကျူးနေတော့ လူကြားထဲ နေရထိုင်ရတောင်ခက်ပါသေးတယ်။
တကယ်ဆို ကျနော်ကျက်လို့ရမယ်မှန်း ဆရာကြီးသိပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို ကျက်လို့ရနိုင်တာပဲလေ။ ဘာသာတရားနဲ့ ထိတွေ့ပေးချင်လို့။ ရိုးရိုးတန်းတန်းကျက်ခိုင်းတာ၊ မကျက်လို့၊ ရတဲ့နည်းနဲ့ လှည့်ပတ် ကျက်ခိုင်းတယ်ဆိုတာ နောင်မှကျနော်သိရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆရာကြီးကြောင့် ရတနသုတ်ကနေ ဓမ္မစကြာ၊ မေတ္တာသုတ်၊ ပဋ္ဌာန်းတွေပါ အားလုံးကျနော်အလွတ်ရသွားတယ်။ ကျနော်တို့နေတဲ့အခန်းက မနက် (၅) နာရီထပြီး ပဋ္ဌာန်းတစ်ရက်၊ ဓမ္မစကြာတစ်ရက်၊ ပရိတ်တစ်ရက် နေ့တိုင်း ရွတ်ကြတယ်။ အရင်ကတော့ ကျနော်က မထဘူး။ သူများတွေ ရွတ်လည်း ခေါင်းမြီးခြုံပြီး ပေအိပ်နေတာပဲ။ နောက်ပိုင်းတော့ ဆရာကြီး ကမရဘူး။ အတင်းလာနှိုးပြီး ထရွတ်ခိုင်းတော့တာပဲ။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ရွတ်တယ်။ ကျနော့်မှာ မထချင်ဘဲနဲ့ သူလာ လာနှိုးလို့ ထရွတ်နေရတယ်။ အဲဒါ ဆရာကြီးချပေးတဲ့ ဘာသာတရားမျိုးစေ့ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ နောက်မှ သိလာရတယ်။ ခုတော့ ကျနော်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကို တကယ်ယုံကြည်လာသူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီး တရားဘာဝနာ ကိုတောင် ကျင့်နေပါပြီ။ ဒီတော့မှ ဆရာကြီးကျေးဇူးဘယ်လောက် ကြီးမားတယ်ဆိုတာ သိလာရ တယ်။ ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတာက ကျနော် ခုလိုဗုဒ္ဓတရားကို နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်နေပြီဆိုတာ ဆရာကြီးသိမသွားရှာဘူး။ သူနဲ့ လူချင်းပြန်ဆုံကြရင် ကဗျာနဲ့ ဘာသာတရား အကြောင်း ကျနော် သိနားလည်ထားတာတွေပြောဖို့၊ ဆွေးနွေးဖို့ စိတ်ကူးခဲ့တာ၊ အခုတော့ ပြောခွင့်မရတော့ ဘူး။ ဒါထက်... သူ ကျနော့်ကို မြင်စေ၊ ဖြစ်စေချင်ခဲ့တာတွေ ကျနော်ဖြစ်နေပြီ။ ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပြီ ဆိုတာ သူသိမသွားရလို့ ယူကြုံးမရဖြစ်မိတယ်။
ဆရာကြီးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ပြောသံ၊ ဆိုသံတချို့ကြားရတယ်။ ဆရာတင်မိုးဟာ လက်ဝဲဝါဒကို အလွန်အမင်း ယုံကြည်သူ၊ ဘာသာတရားမရှိသူ'' တဲ့လေ။ လက်ဝဲဝါဒယုံကြည်မှုဆိုတာ ထားပါ။ ကျနော် ဘာမှ မှတ်ချက်မပြုလိုဘူး။ လူတိုင်း ဘယ်သူမဆို ကိုယ်ကြိုက်ရာဝါဒကို စွဲကိုင်ယုံကြည်ခွင့် ရှိကြတာချည်း ပဲ။ ကိုယ်သန်ရာ ကိုယ်ယုံ။ အရေးကြီးတာက လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အန္တရာယ်မပေးတဲ့ ဝါဒဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာကြီးနဲ့လက်ဝဲဝါဒကိစ္စ ကျနော်ဘာမှ မပြောလိုဘူး။ တစ်ခါမှလည်း ကျနော် သူ့ကိုမမေး ကြည့်ဖူးဘူး။ သူကလည်း အဲဒီအကြောင်း တစ်လုံးတစ်ပါဒမှ ပြောသံမကြားရဘူး။ ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ဦးမြတ်လေးနဲ့ လေးလေးလို့ခေါ်တဲ့ဦးထွန်းဝေအကြောင်းတော့ တဖွဲတနွဲ့ ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ပြောခဲ့ဖူးတာ ပဲရှိတယ်။
အခုကျနော်ပြောချင်တာက ဆရာကြီးမှာ ဘာသာတရား မရှိဆိုတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒါကို ကျနော်လုံးဝ လက်သင့်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုပြောတဲ့သူတွေဟာ ဆရာကြီး အကြောင်း ဂဃဏန မသိကြလို့ တဆင့်စကား နဲ့ ပြောနေကြတာပဲဖြစ်မယ်။ ကျနော်နဲ့နေစဉ်ကာလမှာ သူ့မွေးနေ့၊ တစ်ခါတစ်လေ လပြည့်နေ့တွေမှာ သူ ဥပုသ်စောင့်လေ့ရှိတယ်။ ဆရာကြီးဟာ အင်မတန် နှိမ့်ချတတ်ပြီး မာန်မာနကင်းစင်တဲ့သူပါ။ ဘာသာတရား ကိုလည်း အလွန်လေးစားတယ်။ အထင်ရှား ဆုံး သာဓကနဲ့ပြရရင် ကျနော်တို့ (၅)ဆောင်မှာ (၂၉၅)ပုဒ်မနဲ့ ထောင်ကျနေတဲ့ စာချဘုန်းကြီးလေး တစ်ပါး ရှိတယ်။ ဘုန်းကြီးလေးက အသက် (၃ဝ) စွန်းစွန်းဆိုတော့ ဆရာကြီးနဲ့အသက် ခေါက်ချိုး လောက်ကွာတယ်။ ဘုန်းကြီးဆိုပေမယ့် ထောင်ထဲမှာဆိုတော့ သူလိုကိုယ်လို ထောင်ဝတ်စုံနဲ့ ဆံပင်နဲ့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အပြင်မှာ စာချဘုန်းကြီးလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ ဆရာကြီးက သူ့ဆီက အဘိဓမ္မာ သင်ယူချင်နေတယ်။ ဘုန်းကြီးကလည်း လိုလိုချင်ချင်ပဲ သင်ပေးပါတယ်။ ထူးခြားတာက ဆရာ ကြီးဟာ မသင်ခင်မှာရော သင်ပြီးမှာပါ အဲဒီဘုန်းကြီးလေးကို ကုန်းဦးချတာပါပဲ။ ကန်တော့တာမှ ထိခြင်း ငါးဖြာဆိုသလို နဖူးနဲ့ကြမ်းပြင်ထိပြီး ရိုရိုသေသေလက်အုပ်ချီကန်တော့တာပါ။ စားစရာလေးတွေယူပြီး ဘုန်းကြီးလေးကို သွားပေးတဲ့အခါမှာလည်း ရိုရိုသေသေလက်အုပ်ချီ ကန်တော့ပြီးမှ ပေးတာပါ။
ကျနော်က ဒီ ကိုယ်တော်လေးဟာ 'ကတုံး' လည်းမဟုတ်၊ သင်္ကန်း လည်းမစီးထားဆိုတော့ လူပဲပေါ့။ ဆရာကြီးနဲ့လည်း အသက်အရမ်းကွာတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့် ကန်တော့ရတာလဲ လို့မေးဖူးတယ်။ ဆရာကြီးက ''ရဟန်း''ဆို တာ ဝိနည်းနဲ့အညီ သင်္ကန်းစီးပြီးရင် ဝိနည်းမချိုးပေါက်သ၍ အဲဒီရဟန်းရဲ့ စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲ သင်္ကန်းချွတ် လို့မရဘူး။ ရုပ်ဝတ္ထုဖြစ်တဲ့ သင်္ကန်းကိုပဲ အတင်းချွတ်လို့ရချင်ရမယ်။ ရဟန်းအဖြစ်ကတော့ ဖယ်ရှားလို့မရ ဘူး။ ရဟန်းက ရဟန်းပါပဲ။ ဒီကိုယ်တော်လေးက ဝိနည်းမချိုးဖောက်ပါဘဲနဲ့ အဓမ္မသင်္ကန်းချွတ် ထောင်ထဲ ထည့်ခံ ထားရတာ။ ခုထိ သိက္ခာမချသေးလို့ သူ့ကိုယ်သူ ရဟန်းလို့ ခံယူနေသေးတယ်။ ရဟန်းလိုပဲ ကျင့် ကြံနေသေးတယ်။ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေ သူ့ကိုယ်ထဲမှာ ကိန်းဝပ်နေတယ်။ အဲဒီတရားတော်တွေကို ငါ့ကို ပို့ချနေသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ရိုရိုသေသေကန်တော့တာလို့ . . . စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြ တယ်။
နောက်တစ်ခုက ညနေခင်းတွေမှာ လမ်းလျှောက်ပြီးရင် ကျနော်နဲ့ ဆရာကြီးတို့ သွားထိုင်လေ့ ရှိတဲ့ စေတီလေးတစ်ဆူရှိတယ်။ ဆရာကြီး တစ်ခါမှ ဦးမချဘဲနဲ့ စေတီထဲမဝင်ဘူး။ ဦးမချဘဲနဲ့ စေတီ ထဲက ထွက်လေ့မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်က ''စေတီဆိုတာ အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်၊ ဘိလပ်မြေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့အရာပဲ။ အဲဒါကို ဖြိုချကြည့်လိုက်ရင် အုတ်၊ ကျောက်၊ သဲတွေပဲ ထွက်လာမှာပေါ့။ ဒါကို ဆရာကြီးက ကန်တော့နေတော့ အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်အပုံကြီးကို ကန်တော့နေသလို ဖြစ်နေတယ် .. မဟုတ်ဘူးလား..''လို့ ပြောတော့ သူက ''မင်းပြောသလို အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်တွေနဲ့ လုပ်ထားတယ် ဆိုတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတဆိုတာရှိတယ်။ ကျေးဇူးတရားကို အလေးအမြတ် ပြုတာနဲ့ အမွေအနှစ်ကို လက်ဆင့်ကမ်းသယ်တယ်ဆိုတာ ရှိတယ်။ ဥပမာ မင်းအဖေနဲ့ မင်းအမိုးတို့ ကျွေး မွေးခဲ့တာတွေကို မင်းကျေးဇူးမတင်ဘူးလား။ သူတို့ကျေးဇူးကို ရည်မှတ်ပြီး သူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ သိမ်းမထားဘူးလား။ ဒီလိုပဲပေါ့။ စေတီဆိုတာလည်း ဗုဒ္ဓရဲ့အမွေအနှစ် တွေပါပဲ။ ဗုဒ္ဓရဲ့ကျေးဇူးကိုရည်မှတ် ပြီး အထိမ်းအမှတ်လုပ် တည်ထားတယ်ဆိုတော့ ဒါတွေကို ရည်မှန်းပြီး ကန်တော့တာပဲ။ ဒီအစဉ်အလာ အမွေအနှစ်တွေကို ရှေးလူတွေက လက်ဆင့်ကမ်း သယ်လာကြလို့ ခုထိရှိနေကြတာ။ တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆို တိမ်ကောပျက်စီးကုန်ကြတာတွေ ရှိတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်အောင် တို့တွေကလည်း လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင် သွားရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်။ ဒါမှ ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့လူသားဖြစ်မှာ..'' လို့ ကျနော်နားလည်နိုင်လောက်မယ့်စကားတွေ ရွေးပြီး တခုတ်တရရှင်းပြခဲ့တာပါ။
ဒီလိုမျိုး ဘာသာတရားအပေါ် ကြည်ညိုအလေးမြတ် ထားတဲ့ဆရာကြီးကို ''ဘာသာတရားမရှိသူ''လို့ ပြောဆိုတာကို ကျနော်နားမလည်နိုင်ဘူး။ ခု အသက်ရွယ် ကြီးမှ သက်ဝင် ယုံကြည်လာတာဖြစ်မှာပေါ့။ ငယ်ငယ်ကတော့ ဘာသာတရားရှိချင်မှရှိမယ် ''လို့ အဲဒီလို လှည့် ပြောကြရင်လည်း ကျနော်လက်မခံနိုင်ပါဘူး ။ ဆရာကြီးက ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘုန်းကြီးကျောင်း ပညာရေးနဲ့ကြီးပြင်းလာသူပါ။ သူဆယ်တန်းအောင်တုန်းက မြန်မာတပြည်လုံး မြန်မာစာပထမဆု ရခဲ့တယ်။ အဲဒီ့ဂုဏ်ထူးရမြန်မာစာအဖြေလွှာစာစီစာကုံးမှာ ပရိတ်တရားတော်ထဲက နွေဦးအလှကို ပါဠိလို အပိုဒ်လိုက်ကိုးကားပြီး ထည့်ရေးထားတာ။ ဒါကိုကြည့်ရင် ဆရာကြီးဟာ ငယ်ငယ်ကတည်း က သူ့နှလုံးလားထဲ ဦးနှောက်ထဲမှာ ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိန်းဝပ်နေတယ်ဆိုတာ အထင်အရှားပဲ ။ အဲဒီ့အပြင် ဆရာကြီးဟာ ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုသက်ဝင်ယုံကြည်သူသက်သက်မဟုတ်ဘဲ တရားတော် နဲ့အညီတစ်သက်လုံး ကျင့်ကြံနေထိုင်သွားတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူငြင်းဦးမှာလဲ. . . ။
နောက် ဆရာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာတစ်ခုရှိသေးတယ်။ အထင်အမြင်လွဲကြတာပါ။ ကိုတိုးတိုးထွန်းက ကျနော့်ကို ဒီလိုမေးဖူးပါတယ်။ ဆရာတင်မိုးက ကပ်စီးနည်းတယ်ဆို ။ သူ့ထောင်ဝင်စာကို ဘယ်သူ့ကိုမှမကျွေးဖူးဆို . . ဟုတ်လားတဲ့ ။ ကျနော်အကြီးအကျယ်အံ့အားသင့်သွားတယ်။ တကယ့်ကို ပြောင်းပြန်ကြီးဗျာ။ ကိုတိုးတိုးထွန်းက သူများပြောတာကြားလို့ ဟုတ်လား ဆိုပြီး စကားအဖြစ်မေးကြည့်တဲ့သဘောပါဘဲ။ ဘယ်က ကြားတယ်ဆိုတာလည်း သူပြောပြပါတယ်။ အဲဒါတော့ထားလိုက်ပါတော့လေ။ ကျနော်ပြောချင်တာ က ဆရာကြီးဟာ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းနဲ့ငွေဆိုတာကို ဘယ်တုန်းကမှ မက်မောခဲ့တာ မဟုတ်ဖူးဆိုတာပါပဲ။ ငွေအကြောင်းကို ဘယ်တုန်းကမှစကားထဲတောင် ထည့်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ မဆလပါတီမဝင်လို့ အငြိုးခံထားရပြီး နောက်တော့ ကျူရှင်ပြလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ တက္ကသိုလ်က အနားပေး တော့ သူ့မှာနေစရာအိမ်တောင် မရှိပါဘူး။ ဒီလိုဆင်းရဲခဲ့တာ သူနဲ့နီးစပ်သူတိုင်း သိကြမှာပါ။ အဲဒီလို ငွေကြေးရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကို တန်ဖိုးမထားခဲ့တဲ့သူဟာ ထောင်ထဲရောက်မှ ဘာမဟုတ်တဲ့ ထောင်ဝင်စာထုပ်လေးကို မက်မောနေပါ့မလား။ စဉ်းစားသာ ကြည့်ကြပါတော့။
ဆရာကြီးရဲ့ထမင်းစားဝိုင်းမှာ သူကလွဲရင် ဘယ်သူမှ ထောင်ဝင်စာ ဟုတ်တိပတ်တိ မလာနိုင်ကြပါဘူး သူ့ရှိတာနဲ့မျှစားနေကြတာပါ။ ဆရာကြီးနဲ့တစ်ဝိုင်းထဲစားပြီး ဆရာကြီးကို အစစအရာရာ လုပ်ကိုင် ပေးနေတဲ့ ကိုသိန်းအောင် အသိဆုံးပါ။ ဆရာကြီးက ( ၁၄ )ရက်တစ်ခါ ထောင်ဝင်စာလာတယ်။ သူ့အိမ်ကထည့်ပေးလိုက်တဲ့ အစားအစာတွေဟာ သူတစ်ယောက်တည်းစားရင် ( ၁၄ )ရက် မဟုတ် ဘူး၊ တစ်လစားတောင် ကုန်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဆရာကြီးက မရှိတဲ့သူတွေနဲ့ မရှိအတူ ရှိအတူ ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး မျှဝေစားသောက်တာပါ။ထောင်ဝင်စာလာလို့ အခန်းပြန်ရောက်တာနဲ့ သူ့ ထောင်ဝင်စာထုပ်ကို လှည့်ကိုမကြည့်တော့ဘူး ။ ထမင်းဝိုင်းကို အပြီး အပ်လိုက်တာပဲ။ ထမင်းဝိုင်းက စီစဉ်တဲ့သူက စီစဉ်ပြီး သူ့ကိုထည့်ကျွေးတာပဲစားတယ်။ ဟိုဟာပေးပါ ဒီဟာပေးပါ တစ်ခါဖူးမှမတောင်းဖူးဘူး ။ ရဲဘော်ကြီးကိုသိန်းအောင်က အားလုံးသိမ်းဆည်းပြီး စီမံပေးတာ။ တခါတလေ စားစရာပြတ်သွားတဲ့အခါတောင် ရှိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာကြီးက တစ်ခါမှ မညည်းဖူးဘူး ။ သူ့ထည့်ကျွေးတာနဲ့စားတာပဲ။ တကယ်ဆို သူ့အသက်အရွယ် သွားတွေလည်း မရှိဆိုတော့ အခွင့်ထူးယူမယ်ဆို ယူခွင့်ရှိလျက်နဲ့ သူမယူဘူး ။ ဒါတွေအားလုံး သူ့ဝိုင်းစားတွေ အသိဆုံးပါ။ အထူးသဖြင့်ကိုသိန်းအောင်ကြီး အသိဆုံးပါ။
တခါတလေဆရာကြီး မိတ်ဆွေတချို့က သူ့ဆီက စားစရာတောင်းရင် သူပိုင်ပစ္စည်းတွေပဲ သူယူပေးလို့ရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ကိုယ်တိုင်ယူပေးတာမျိုးမလုပ်ဘူး။ ကိုသိန်းအောင်ကိုမေးတယ်။ ရှိသေးရဲ့လား ရှိရင် နည်းနည်း ပေးလိုက်ပါ။ မရှိလည်း ကိစ္စမရှိဘူး ။ အဲဒီလိုခွင့်တောင်းတာပါ။ ပြီးတော့ဆရာကြီးဟာ အရမ်းလည်း အားနာတတ်တယ်။ တစ်ဖက်သားကို အရမ်းငဲ့ညှာတတ်တယ်။ ဒီလိုစိတ်အခံရှိတဲ့ ဆရာကြီးကို ခုနကလို ပြောကြတာတွေကြားရတော့ ကျနော်တော်တော်အံ့သြပါတယ်။ လောကကြီးက ပြောင်းပြန် ကြီးပါလား ။ မသေချာမှုတွေ ပြည့်နှက်နေပါလားလို့ ခံစားမိတယ်။ ဂဃနဏမသိဘဲ ထင်ရာလျှောက် ပြောနေတော့ တဆင့်စကားတဆင့်နဲ့မဟုတ်တာကြီးအဟုတ်ဖြစ်သွားကြရရော။ ခုဆို ကိုတိုးတိုးထွန်း က သူကြားတာမေးလို့ပေါ့။ မမေးဘဲ တကယ်ထင်နေရင်မခက်ပါလား ။ ကိုငွေလင်းလည်း ဒီလိုပဲ သိထားတာလို့ ကျနော့်ကိုပြောဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်ရှင်းပြလိုက်တော့ သူတို့တွေ ရှင်းသွား ကြပါတယ်။ အမှန်သိသွားကြတာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တကယ်မသိဘဲနဲ့ထင်ကြေးနဲ့ ပြောတာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သိလျက်နဲ့တခြားမကျေနပ်ချက်တစ်ခုခုကြောင့် ရည်ရွယ်ပြီးပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနှစ်ခုလုံး မကောင်းဘူး ။ အကုသိုလ်ချည်းဘဲ။
Phan Mee Ain - Literature Lovers said...
မောင်ရစ် အရင် ဖတ်တယ်ိ
ထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့ ရပ်တည်ချက်ကောင်းပြီး အခုလိုဆရာ ကြီးတို့လိုပေါ့ဗျာ ဝါရင့်ကြီးတွေနဲ့ (ဆိုလိုတာက စာပေ၊နိုင်ငံရေးကိုပြောတာပါ) နေခဲ့ ကိုယ်ကိုတိုင်လဲ ခံယူချက်ကောင်းတဲ့သူတွေဟာ နိုင်ငံရေးအရ မယိမ်းယိုင်ရုံတင်မကဘူး စာရေးကောင်းတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရတယ် မမိုးချိုသင်းရေ ဆရာကြီးရဲထောင်တွင်းရပ်တည်ချက်တွေ ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုတာ လက်တွေ့သိလာကြရတာပေါ့ဗျာ။
January 23, 2009 at 11:57 PM
လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ထောင်တွင်း အတွေ့ကြုံ နဲ့ ဆရာကြီးနဲ့ ဆက်ဆံရေးက အံ့သြမှုတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အရမ်းကောင်းတာပဲ အခုလို ကိုယ်တိုင် လူငယ်လေးနေရာဝင်ခံစားကြည့်လိုက်တော့မမြင်ဖူးတဲ့
ဆရာကြီးကို ပိုလို့တောင် လေးစားလာမိတယ်။
ကြီးတွေပဲ ကြံကြံခံတဲ့ သူတွေကို လေးစားမိတယ် ပြီးတော့ ပိုသနားတယ်။စောင့်ဖတ်နေပါအုံးမယ် ။
အမချိုသင်းရေ ဖတ်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ။ ချစ်စရာကြီးနော် ဆရာကြီးက။ နောက်ထပ်လည်း ဖတ်ချင်လို့ မျှော်နေအုံးမယ်။ သနားတာရော ကြည်နူးတာရော ဝမ်းသာ ဝမ်းနည်း လေးစားစရာတွေရော အကုန်ခံစားနေရတယ် ဒီစာဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာ။ စာရေးတဲ့သူကလည်း အရေးကောင်းလိုက်တာ။
စာရေးတဲ့သူဟာ ဆရာကြီးကို ဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆိုတာ သူ့စာဖတ်ပြီးအရမ်းသိသာတယ်....။
သူတော်ကောင်းနဲ့ ထောင်ထဲမှာ ဆုံခဲ့ရတာပေါ့နော်...။
အစ်မရေ စာအုပ်ကလေးဖြစ်သွားရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ .. အစ်မက မောင်နှမတွေအများကြီးပဲနော် .. ဆရာကြီးကလည်းသားသမီးတွေ အများကြီးပဲ။ တူးတို့လည်း အဲဒီထဲကတယောက်ပါပဲ အစ်မရာ။
စိတ်ထဲမှာ ငိုချင်သလိုလို ဆို့ဆို့နင့်နင့်ကြီး ဖြစ်သွားလိုက်၊ ပီတိစိတ်ကလေး ဖြစ်လာလိုက်၊ လေးစားတဲ့စိတ်တွေ ဖြစ်လာလိုက်နဲ့ တချက်တချက်ဆို ဒီစာကို ရေးတဲ့ ဆရာနေခြူးရဲ့ နေရာမှာတောင် ၀င်ခံစားမိစေလောက်အောင် ဖြစ်ရပ်မှန်တွေက တကွက်ခြင်း တကွက်ခြင်း ဖတ်သူကို ဆွဲခေါ်သွားတယ်။
နေခြူးက စာရေး အရမ်းကောင်းတာပဲ။ ခုလိုမျိုး မမြင်ကွယ်ရာက ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို ဖတ်ခွင့်ရတာ ဝမ်းသာမိသလို၊ ထောင်တွင်း အကျဉ်းကျ ခံရသူတွေ (မတရားသဖြင့်) အတွက် စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်မိတယ်။
ဖတ်ပြီး ဘာပြောရမှန်း မသိဖြစ်မိတယ်၊၊ အစ်မ MCT အဖေ့( ဆရာကြီး ဦးတင်မိုး) ကို ဂုဏ်ယူလေးစားမိ ပါတယ် ၊၊
မမ က ငယ်ငယ်ထဲ က ကဗျာတွေ ဆို..တခုတ်တရ..ချစ်ခဲ့ တဲ့သူ... ဆရာကြီး က... ဆရာဇော်ဂျီ၊ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ် တို့ ဆရာ မောင်စွမ်းရည် တို့နဲ့တန်းတူ.. နှစ်သက် ခဲ့..လေးစားခဲ့ ရတာပါ...
မီးရထားနဲ့ခရီးသွားခြင်း ဆိုတဲ့ ကဗျာ ကို.. မသိခဲ့ ဘူး..
အဲဒီ ကဗျာ ဖတ်ပြီးတဲ့ နေ့ ထဲ..က ...ကဗျာ က ..ရင် တဲ.. ခေါင်းထဲက .. မထွက် ဖူး..... ခုကဗျာလေး ထပ်လာ ကူးတာပါ... ခွင့်ပြုနော်.....
Nway Hlaing Thoone said...
ဒီဘက် စာမျက်နှာတွေထိ HipHop ခရီးဆက်လွှင့်ရတာ အားနာပါတယ် ။အမြင်မတူတာကို မတူတဲ့အကြောင်းပွင့်လင်းစွာ ကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေက မလိုရင် မလိုသလို ပိတ်ပင်ထားလို့ ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်တွေ ရှိသူလို့ထင်ထားသူတွေဆီ ခရီးဆန့်လာခဲ့တာပါ ။စာသားကြမ်းလို့ အပြစ်တင်ခံရတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆွေးနွေးရန် အဆင့်သင့်ပါလို့ ။
ဆရာကြီးအကြောင်းကို ဆရာနေခြူးက ရေးထားတာကို ဖတ်ရတော့ ဆရာကြီးကို ချစ်ခင်လေးစားစိတ်တွေပိုမိပါတယ်...ဆရာနေခြူးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
ပြန်လည်တင်ပြပေးတဲ့မမိုးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။